Stan and Ollie (2018) | MM Movie Store
“ဘယျသူပွိုငျလို့လှပါတော့နိုငျ “ဆိုတဲ့ဇာတျကားကို ဆရာကွီးဦးသုခရိုကျတော့လူကွမျးသရုပျဆောငျ ဦးအံကြျောကွီးပါလာတယျ…အမွဲတမျး လူကွမျးဗီလိနျ သရုပျဆောငျသော ဦးအံကြျောကွီးကဆရာကွီးဦးသုခရဲ့ ဇာတျကားထဲတှငျ စာမတတျပမေတတျ ကိုခဈြစရာအဖွဈသရုပျဆောငျပွီးထနျးလကျြတောငျးကွီးထမျးကာ ဆရာမလို့ရငျခေါငျးသံကွီးအျောချေါပွေးလိုကျတဲ့ ဟနျပနျကကြှနျတျောတို့အားလုံးရဲ့ ကိုမကျြရညျစို့စခေဲ့သညျ…
ဒီကားနဲ့ပငျ အကယျဒမီဆုကွီးကို ထိုကျထိုကျတနျတနျရရှိခဲ့သညျ….ဆရာကွီးဦးသုခလို လူမြိုးကွီးနဲ့ လကျတှဲခှငျ့ရလိုကျတဲ့ဦးအံကြျောကွီးကံကောငျးတယျလို့ပငျပွောရမညျလားမသိပေ… ဒီဘကျခတျေမှာတော့လူကွမျး၊ဗီလိနျ၊ဟာသသရုပျဆောငျတှအေတှကျ လုပျကှငျး လုပျကှကျ အတျောနညျးသညျမှာအထှအေထူးငွငျးစရာမရှိပေ….
ဒီကားကတော့ Oliver Hardy(John C.Reilly) နဲ့ Stan Laurel(Steven Coogan) တို့နှဈယောကျရဲ့ဖွဈရပျမှနျကိုပွနျလညျရိုကျကူးထားတဲ့ဇာတျကားတဈကားဖွဈပါတယျ…သူတို့(၂)ယောကျဟာ အတှဲညီညီ ပွောကျမွောကျတဲ့ ပွကျလုံးတှကွေောငျ့ ငယျစဉျအခါမှာတော့အတျောအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ…
နောကျပိုငျး ခတျေကာလ အပွောငျးအလဲကွောငျ့ လူတှကေ သူတို့ကို သိပျမကွိုကျကွတော့ပါဘူး..သူတို့ရဲ့အရညျအခငျြးကို အကောငျးဆုံးအသုံးခပြေးမယျ့ သူ လကျတှဲဖေးမပေးမယျ့သူလညျးမရှိ့ဘူး…သို့ပမေယျ့ သူတို့(၂)ယောကျလကျမလြော့ခဲ့ဘူး…သူ့တို့ရှခေတျေကိုပွနျရောကျဖို့ တကျညီလကျညီကွိုးစားတဲ့အခါမှာတော့…
ကိုငျး သူတို့ဘယျလိုကွိုးစားကွလဲ…သူတို့အောငျမွငျနိုငျပါ့မလား…ဒီကားကိုကွညျ့ရငျး ရှေးခတျေတငျဆကျပုံတှကေိုကွညျ့ရမှာဖွဈသလိုသရုပျဆောငျတှနေဲ့ ဒါရိုကျတာတှကွေား၊ထုတျလုပျသူတှေ၊ခတျေအလိုကျပရိတျသတျတှကေိုတဈခါထဲဗဟုသုတရဖှယျတှရှေိ့ပါလိမျ့မယျ…ကိုငျး ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦး
“ဘယ်သူပြိုင်လို့လှပါတော့နိုင် “ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကို ဆရာကြီးဦးသုခရိုက်တော့လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဦးအံကျော်ကြီးပါလာတယ်…အမြဲတမ်း လူကြမ်းဗီလိန် သရုပ်ဆောင်သော ဦးအံကျော်ကြီးကဆရာကြီးဦးသုခရဲ့ ဇာတ်ကားထဲတွင် စာမတတ်ပေမတတ် ကိုချစ်စရာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ပြီးထန်းလျက်တောင်းကြီးထမ်းကာ ဆရာမလို့ရင်ခေါင်းသံကြီးအော်ခေါ်ပြေးလိုက်တဲ့ ဟန်ပန်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ ကိုမျက်ရည်စို့စေခဲ့သည်…
ဒီကားနဲ့ပင် အကယ်ဒမီဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲ့သည်….ဆရာကြီးဦးသုခလို လူမျိုးကြီးနဲ့ လက်တွဲခွင့်ရလိုက်တဲ့ဦးအံကျော်ကြီးကံကောင်းတယ်လို့ပင်ပြောရမည်လားမသိပေ… ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့လူကြမ်း၊ဗီလိန်၊ဟာသသရုပ်ဆောင်တွေအတွက် လုပ်ကွင်း လုပ်ကွက် အတော်နည်းသည်မှာအထွေအထူးငြင်းစရာမရှိပေ….
ဒီကားကတော့ Oliver Hardy(John C.Reilly) နဲ့ Stan Laurel(Steven Coogan) တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…သူတို့(၂)ယောက်ဟာ အတွဲညီညီ ပြောက်မြောက်တဲ့ ပြက်လုံးတွေကြောင့် ငယ်စဉ်အခါမှာတော့အတော်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်…
နောက်ပိုင်း ခေတ်ကာလ အပြောင်းအလဲကြောင့် လူတွေက သူတို့ကို သိပ်မကြိုက်ကြတော့ပါဘူး..သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းကို အကောင်းဆုံးအသုံးချပေးမယ့် သူ လက်တွဲဖေးမပေးမယ့်သူလည်းမရှိ့ဘူး…သို့ပေမယ့် သူတို့(၂)ယောက်လက်မလျော့ခဲ့ဘူး…သူ့တို့ရွှေခေတ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့ တက်ညီလက်ညီကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့…
ကိုင်း သူတို့ဘယ်လိုကြိုးစားကြလဲ…သူတို့အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား…ဒီကားကိုကြည့်ရင်း ရှေးခေတ်တင်ဆက်ပုံတွေကိုကြည့်ရမှာဖြစ်သလိုသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ ဒါရိုက်တာတွေကြား၊ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ခေတ်အလိုက်ပရိတ်သတ်တွေကိုတစ်ခါထဲဗဟုသုတရဖွယ်တွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်…ကိုင်း ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး
Nineteen: Shh! No Imagining! – Link 1